eNasha.com - चुनाव सामग्री प्रदर्शनी भोलिदेखि
चुनाव सामग्री प्रदर्शनी भोलिदेखि
तपाइँलाई चुनावले कत्तिको आकर्षण गर्छ ? अथवा आउँदो संविधानसभाको निर्वाचनका बारेमा कत्तिको चासो राख्नु हुन्छ ? अथवा नेपालको पहिलो आम निर्वाचनसम्बन्धी तपाइँमा निकै जिज्ञासा हुनुपर्छ, त्यस्तो छ ? छ भने आउनुहोस्, यलमाया केन्द्रमा ११ गते । जहाँ नेपालको पहिलो आम निर्वाचनदेखि पछिल्लो माघमा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सम्पन्न निर्वाचनसम्मका निर्वाचन सामग्रीको प्रदर्शनी चलाइने भएको छ ।
नेपालमा संविधानसभा निर्वाचनको प्रसङ्ग चलिरहँदा मदन पुस्तकालय पाटनढोकाले यो प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने भएको हो । राष्ट्रिय निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रदर्शनीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले उद्घाटन गर्ने भएका छन् ।
यो प्रदर्शनीले आउँदो मङ्सीरमा आयोजन हुन लागिरहेको संविधानसभाका बारेमा चासो बढाउन मद्दत पुग्ने मदन पुस्तकालयले आशा राखेको छ । पाटनढोकाको यलमाया केन्द्रमा ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म चल्ने यो प्रदर्शनीमा तपाइँ पनि आउन भ्याउनु होला नि, होइन ?
संविधानसभा माओवादी हल्ला awards मोबाईल सेलेब्रिटी पेट्रोल समलिङगी अनुभव hi-life crisis streets celebrity events festival